Mon, Nov 18, 2019 at 7:24pm
शुक्रबार, १७ श्रावन २०७६,	आहाखबर
घोराही, १७ साउन ।
दाङ देउखुरीका विभिन्न सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत धमाधम पुराना रूख काटिए । अझै कतिपय सामुदायिक वनमा त झाडी सफाइको नाममा साना रुख पनि बाँकी छैनन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले एकातिर फाइदा पुर्याए पनि अर्कोतर्फ नोक्सान भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
लमही नगरपालिका–७ निवासी प्रकाश चौधरीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले नोक्सानसँगै थप समस्या सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ । “हाम्रो रोजीरोटी यही जङ्गल हो, गाई बाख्रा चराउनु पर्छ पाइँदैन ।” चौधरीले भन्नुभयो, “जङ्गलमा चरण रोक्काले गरिएको छ भने बूढा र साना रुख काटिएका छन् ।” उहाँको भनाइमा गाईबस्तुको आहाराको रुपमा प्रयोग हुने साना जातका रुख पनि सबै सखाप भइसके । जसको कारण पहिले प्रशस्त देखिने जङ्गली जनावर र पशुपक्षी पनि अचेल देखिन छाडेका छन् ।
पुराना र धोन्द्रे रूखमा पशुपक्षीको बासस्थान हुने भएकाले उनीहरूको बासस्थान सङ्कटमा पर्न थालेको जानकार बताउँछन् । पुराना र धोन्द्रे रुखमा बसोबास गर्ने पक्षी लोप हुने खतरामा छन् । दाङ देउखुरीका सामुदायिक वनमा वन व्यवस्थापनको नाममा पुराना रुख काट्न थालेपछि वन्यजन्तुको अस्तित्व हराउन थालेको वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति दाङका अध्यक्ष उमाकान्त पन्त बताउनुहुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पुराना रूख काट्नाले जैविक विविधतामा असर परेको उहाँको बुझाइ छ ।
सामुदायिक वनका पुराना रुखमा बसोबास गर्ने लाटोकोसेरो, लासे, धनेस, सर्प, छेपारोलगायतका प्रजातिका जनावर लोप हुने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले जङ्गली गोँहोरो, टोँड्कामा बस्ने सर्प, धनेसलगायतका प्रजाति पाइनै छाडे ।” पछिल्लो समय जङ्गलमा पाइने घस्रने र ठूलाठूला रुखमा बस्ने विभिन्न प्रजाति लोप हुने अवस्थामा रहेकाले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने संरक्षणकर्मी चिरञ्जीवी खनालले बताउनुहुन्छ । टोँड्को र धोन्द्रे रुखमा धमिरा, किरासँगै चरा बस्छन् । तिनै रुख हटाउँदा त्यहाँ बसिरहेका र बासस्थान बनाउने प्रजाति अन्यत्रै बसाई सर्ने अवस्था आएको उहाँको धारणा छ । भालु, निरबिरालो, गोह्रा, उड्ने लोखर्केलगायतका वन्यजन्तु रुखमा बस्ने गर्दछन् । वैज्ञानिक वनअन्तर्गत ठूलाठूला रुख मासिँदा वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको अनुसन्धानकर्ता खनालले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीले पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनको पक्षमा सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । पुरानो कार्ययोजनामा प्रशस्त उपभोक्तालाई अधिकार भएकाले वन मास्ने गरी आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । विविधतामा असर गर्ने र उपभोक्तामैत्री नभएको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुन नहुने उहाँको बुझाइ छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको ठूला र बूढा रुख हटाउँदै नयाँ बिरुवा हुर्काउनु हो । देउखुरी क्षेत्रमा रहेका १४८ सामुदायिक वनमध्ये २० वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये १५ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत काम शुरु भइसकेका छन् । बाँकी पाँच वटा वनमा तत्काल शुरु हुने डिभिजन वन कार्यालय लमहीले जानकारी दिएको छ ।
गुगल म्यापमा आयो इन्कग्निटो मोड, युजर्सले आफ्ना डेटा गोप्य राख्न सक्ने
संसारकै ठूलो ‘फाइभ-जी’ नेटवर्क शुरु गरेर चीनले उछिन्यो अमेरिकालाई !
ट्वीटरमा राजनीतिक विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लागेपछि अमेरिकामा तरंग
यस्ता छन् विश्वमा सबैभन्दा बढी ह्याक हुने पासवर्डहरु, कतै तपाईं पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ कि ?
फेसबुकलाई पछि पार्दै टिकटक बन्यो सर्वाधिक डाउनलोड हुने एप
डिजिटल नेपालको कार्यढाँचा स्वीकृत, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्ने
एनसेलको तिहार अफर : अब चार गुणा बढि फोरजी डेटा बोनस
भौतिक शास्त्रमा कुँवरको अर्को सफलता....
युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै उपराष्ट्रपतिले भने - अब मातृभूमिमै रहेर अनुसन्धान गर्नु
अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सोमबारदेखि